ReserveaTable (ရေးဗားမွေး ကော်ဖီဆိုင်)
အစားအစာ အမျိုးအစား : ထိုင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ အစားအစာ
လက်ခံနိုင်သော လူဦးရေ : ၁၂၀ ဦး
မြေညီထပ်တွင်ရှိသော River Moei ကော်ဖီဆိုင်တွင် မနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ နှင့် ညစာများ သုံးဆောင်နိုင်ပြီး အမဲသားကင် မှစ၍ ဖတ်ထိုင်း (ထိုင်းခေါက်ဆွဲကြော်) ၊ ဖတ်ကဖောင်း ကိုင် (ကြက်ပင်စိမ်းထမင်း) အစရှိသော ထိုင်း အစားအစာ နှင့် နိုင်ငံတကာ အစားအစာများ ကိုရရှိနိုင်သည်။ ဘူဖေး ညစာများကိုလည်း ပုံမှန် တည်ခင်းပေးလျှက်ရှိသည်။
ဖွင့်လှစ်ချိန် : မနက် ၆ နာရီ - ည ၁၀ နာရီ အထိ
စားသောက်ဆိုင် အီးမေးလ် : [email protected]
စားသောက်ဆိုင် ဖုန်း : 66(0)5553 2601-8 ex. 131
စားသောက်ဆိုင်၏ အခြားဖုန်း : 66(0)5553 2601-8 ex. 181
Reserveatable at ရေးဗားမွေး ကော်ဖီဆိုင်